Wondershare PPT2DVD Pro-Enyere gị aka ọkụ gị PowerPoint ngosi ka DVD maka egwu na TV ma ọ bụ tọghata gị PowerPoint ngosi mmịfe ka video mfe na ngwa ngwa. Nke a ndu ga-egosi gị otú ị ọkụ PowerPoint ngosi mmịfe ka DVD ngosi. Nzọụkwụ ndị fọrọ nke nta otu iji tọghata PowerPoint ka video.
Import PowerPoint faịlụ
Mgbe download na wụnye PPT2DVD Pro, na-emeghe ya ma họrọ "Mepụta Standard DVD si PowerPoint" ke mmalite-elu ihuenyo. Na Import panel, Pịa Tinye na-agagharị na PowerPoint faịlụ na diski ike gị na mbubata ka PPT2DVD Pro ọkụ ma ọ bụ converting. Pịa Ọzọ ịnọgide.
Atụmatụ: i nwere ike tinye ruo 12 PowerPoint faịlụ na otu oru ngo.
Mee ntọala (nhọrọ)
Nke a bụ nhọrọ nzọụkwụ. Ị nwere ike iji ndabara ntọala maka n'ozuzu ojiji, ma ị nwekwara ike ime ka ntọala ndị a nhọrọ:
Abụọ TV ụkpụrụ: NTSC na PAL dị. NTSC bụ maka America, Canada na Japan, mgbe PAL (SECAM) bụ maka Europe, Asia na mba ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke TV ọkọlọtọ ịhọrọ, pịa "Họrọ site Country" button maka enyemaka. Ọzọ nhọrọ bụ akụkụ ruru. Ị nwere ike họrọ 4: 3 N'ihi na nkịtị TV ma ọ bụ 16: 9 n'ihi na obosara ihuenyo, dabere na gị TV ihuenyo size.
Ọ bụ ruo gị otú gị ngosi ga-egwuri: Auto play mode ma ọ bụ Manual play mode. Ego mbụ nhọrọ na ndenye slide oge maka na-akpaghị aka na-akpọ ngosi. Ma ọ bụ họrọ "Play slides aka na DVD" na-egwu ngosi na a ime akara.
Advanced ntọala agụnye DVD ntọala (video àgwà na asụsụ), okirikiri nhọrọ ukwuu ntọala (ndabere image, video size na logo), n'okirikiri ntọala (akaghị na ogbi mbụ ụda), na ụda edekọ nhọrọ).
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ iji tọghata PowerPoint ka video, ị nwere ike họrọ video mmepụta format na video ntọala akụkụ, kama ọ bụ naanị Auto play mode dị.
Pịa Ọzọ ịnọgide.
Mepụta DVD menus
Ugbu a, i nwere ike na-ede akwụkwọ a ezi na-achọ DVD menu n'ihi na gị n'ihu. Site na ndabara, a DVD menu ga-etinyere. Ị nwere ike mfe ịgbanwe ya site na-ahọpụta mmasị otu na ekpe. Gaa ọzọ Atiya n'ihi na ihe DVD menu ndebiri si template dobe-ala ndepụta.
Na menu ọrụ ohere, ị nwere ike ịdọrọ ịkwaga n'ihu na mata ederede dezie. Right pịa itinyekwu odide ma ọ bụ ịgbanwe DVD menu ndabere oyiyi. I nwere ike ịgbanwe ngosi etiti ma play button ịke site abụọ-na ịpị ha. Na ala nke window, i nwere ike tinye n'okirikiri na-eme ka ọ na ihe nkecha. Mgbe ị na-rụchaa DVD menu, pịa ọzọ ịnọgide.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị ego "gbanyụọ DVD menu" na aga na nzọụkwụ, mgbe ahụ, DVD menu taabụ adịghị. N'otu aka ahụ, ọ dịghị menu ntọala ma ọ bụrụ na ị na tọghata PowerPoint ka video.
Malite PowerPoint ka DVD ọkụ ma ọ bụ akakabarede
The apa ọkụ ka diski nhọrọ ga-abụ dị ma ọ bụrụ na ị nwere na-arụ ọrụ DVD burner. Ego a nhọrọ na pịa Malite isure PowerPoint ngosi ka DVD na menu. I nwekwara ike tọghata PowerPoint ka ISO oyiyi faịlụ maka ndabere ma ọ bụ na-ere-atọ ndị ọzọ DVD ọkụ software.
Iji tọghata PowerPoint ka video, họrọ mmepụta nchekwa na iti Malite.
Mgbe converting PowerPoint faịlụ ka DVD ma ọ bụ video, ị pụrụ ịnapụta ngosi ka TV, YouTube, Facebook, na ndị ọzọ.